Hackers The Julian Assange oo lagu qabtay London | Apg29
Hackers The Julian Assange oo lagu qabtay London
waqti Justice dhammayn samaynta. The Hackers iyo aasaasaha Wikilleaks Julian Assange ayaa lagu qabtay London by booliska Ingiriiska tan iyo markaas Ecuador ayaa uu magangalyo siyaasadeed.
Julian Assange ayaa muddo toddobo sano ah ku noolaa in safaaradda Ecuador ee London tan iyo markii uu la siiyay dalka magangelyo 2012.
xiray waa qarow ah ee Assange oo hadda waa laga tegi karaan si ay Maraykanka. In Maraykanka, waxa uu danbiga looga shakisanyahay ah qaybinta waraaqaha qarsoon.
Lagu eedeeyay kufsiga ee Sweden
Julian Assange ayaa lagu eedeeyay kufsiga in Sweden, laakiin baaritaan ayaa la xiray 2017.
Waxa ay ahayd sanadkii 2010 in Julian Assange ayaa la qabtay iyaga oo maqan ay maxkamadi Swedish looga shakisan yahay kufsi.
Waxaa uu ahaa in Sweden in la siiyo casharo, oo ay ku jiraan qalcaddii LO ee Stockholm on theme ee "khasaaraha ugu horeysay ee dagaalka waa run." In xidhiidh la leh booqasho in ay Sweden la sheegay Assange ee kufsiga iyo faraxumaynta galmada ee laba dumar ah, wax Express ahaa kii ugu horeeyay inuu u muujiyo.
Assange ayaa beeniyay eedaymaha lakiin waxa uu diiday in ay u muuqdaan su'aalo, maxaa yeelay, wuxuu ka cabsanayay in ay Sweden u dhiibi lahaa Maraykanka. Bishii December 2010 ayuu la xiray by booliska British laakiin maxkamadda goostay inuu sii daayo damaanad.
Bishii June, laba sano ka dib, ayuu dalbaday magangelyo siyaasadeed ee safaaradda Ecuador ee London - halkaasoo uu daganaa tan.
Ciise oo dhigaya dad xor ah
Waxa ugu fiican ee hadda waa in aasaasihii Wikileaks Julian Assange ka cararaya in ay Ciise. Safaaradda ma shaqeeyaan. Hase yeeshee, waxa uu ahaa xabsi ah aasaasihii, laakiin Ciise oo dhigaya dad xor ah!
Vecka 29, fredag 19 juli 2019 kl. 15:07